TPS ယီမင် - သင့် TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
ဓာတ်ပုံ: REUTERS/Rebecca Cook
TPS Yemen – ငါ၏အ TPS တဲ့အခါမှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါဘူး?
You will need to re-register. To maintain your TPS status, you must have re-registered during the 60-day re-registration period that runs from August 14, 2018, through October 15, 2018. To register or re-register for TPS you must file Form I-821, Application for Temporary Protected Status. Follow the steps under “What to file” အပေါ် ဒီစာမျက်နှာ. Then send to one of the addresses under “Where to file” on the Yemen page.
Employment authorization documents (EAD) will be automatically extended from September 3, 2018, to March 2, 2019. If USCIS approves your TPS re-registration application, you will be issuedanew EAD with the expiration date of March 3, 2020. ကိုသွားပါ ဒီ USCIS စာမျက်နှာ to read how to get new employment authorization documents.
ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်သည်အထိ, သင်တို့ရှိသမျှသည်အသစ်သောသတငျးအခကျြအပျေါ updated ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်. TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, နှင့်သင်၏နောက်ခြေလှမ်းဘို့သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုပွငျဆငျ.
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 2319 Wyoming Ave NW, ဝါရှင်တန်, DC က 20008.
ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်: (202) 965–4760.